गहना निर्यातको ८० प्रतिशत सुन आयात गर्न पाउने
सुनचाँदी व्यवसायीले निर्यात भएको गहनाको ८० प्रतिशत सुन आयात गर्न पाउने भएका छन् । गरगहना निकासीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न दिने भएको हो ।
कैलालीका मुक्तकमैया महिलाले आयआर्जनका लागि लोकल कुखुरापालन, तरकारीखेती लगायतका कृषिकार्य गर्न थालेका छन् । लोकल कुखुरापालन र तरकारीखेतीबाट आयआर्जन हुन थालेपछि उनीहरूले सो व्यवसायलाई बृहत् बनाउने सपना उन्न थालेका हुन् । सानोखोरमा सातवटा माउबाट लोकल कुखुरा पाल्न थालेकी कैलारी गाउँपालिका–६, हिरापुर मुक्तकमैया शिविरकी गीता चौधरीले अहिले लोकल कुखुराको संख्या चार गुणा बढाएकी छिन् ।
दोलखाका स्थानीय तहलाई बेरुजु घटाउन सकस भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा अत्यधिक बेरुजु रहेको स्थानीय तहमा एक वर्षपछिको लेखापरीक्षणमा समेत बेरुजु घटाउन सकेका छैनन् ।
श्रीराम टोबाकोविरुद्ध कर छलीको मुद्धा
बुटवलमा रहेको श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिले १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरेको अभियोगमा रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छः अर्थविद्
अर्थविद् तथा पूर्वराजदूतहरुले एक स्वरमा अमेरिकी सहयोग (एमसीसी)बारे कुनै विवाद नगरी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा भएको अन्तरक्रियामा श्रीलंकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए । तर, यस्तो परियोजना संसदबाटै अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको संविधानले पनि कुनै व्यवस्था नभएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै अनुमोदन गर्दापनि हुने उनले बताए ।
बाराका साना तथा ठूला मालवाहक यातायात व्यवसायीहरु मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)मा दर्ता नहुँदा सामान ओसारपसारमा समस्या आएको छ । सरकारले यही पुस १ गतेदेखि ढुवानी भाडामा अनिवार्य भ्याट लागू गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुले सामान लोड अनलोड नगर्दा समस्या सिर्जना भएको हो । सरकारले ऐन संशोधनमार्फत चालू आर्थिक वर्षदेखि नै साना तथा ठूला मालवाहक सवारी साधनमा भ्याट अनिवार्य लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
नियमित बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै बजारमा नियमित तथा प्रभावकारी ढंंगबाट बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेको पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पठाएका करिब ११ सय ६६ आयोजना स्वामित्व विवादका कारण अलपत्र बनेका छन् । आयोजना सञ्चालनबारे कुनै मोडालिटी नहुँदा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरिएका ४७७ वटा सडक अयोजना र ६८९ वटा खानेपानीका आयोजना अलपत्र परेको पाइएको हो । यसबाहेक सशर्त अनुदानमा आधारित हजारौं खुद्रे आयोजनाहरूको अवस्था भयावह बन्दै गएको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले स्वामित्वबारे उपयूक्त नीति नहुँदा २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४७७ सडक आयोजना अलपत्र परेको जानकारी दिए ।
उखुको मूल्यप्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ सिफारिस
उखुको मूल्य सन्दर्भमा गठित मूल्य निर्धारण सिफारिस समितिले प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा सिफारिस गरेको थियो। जुन गत सालकै मूल्यबराबरहो। उखुको मूल्य निर्धारण गर्नका लागि उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले उखुको मूल्य निर्धारण गरेसँगै कार्यान्वयन आउने छ । मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मीला केसीले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ ५६ पैसा प्रस्ताव गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको जानकारी दिइन ।
वित्तीय अपराधको जोखिम बढ्यो : अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रविधिमा आधारित रहेर वित्तीय तथा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको भन्दै लेखापरीक्षकहरुले ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान)ले आयोजना गरेको प्रोफेसनल इन्टिग्रिटी फर कम्ब्याटिङ करप्सन एण्ड फ्रड सम्बन्धी अन्तरक्रियामा अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तीय अपारधका दायार बढीरहेको भन्दै त्यो नियन्त्रणको चुनौती रहेको बताए ।
गुल्मी जिल्लाका १२ वटा स्थानीय तहको १३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । केही स्थानीय तहले मनोमानी रकम वितरण गरेको पाइएको छ । गुल्मीको स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा १२ करोड ७५ लाख १४ हजार बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ्स (बीआरआई) का माध्यमले नेपाल र चीनबीचको मित्रता थप उचाइमा पुग्ने चिनियाँ अधिकारीहरूले बताएका छन् । बीआरआर्ई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि नभइ आर्थिक सामाजिक विकासका लागि चीनले अघि सारेको विश्वव्यापी कार्यक्रम भएको भन्दै चिनियाँ प्राज्ञिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले छिमेकी नेपालले यस कार्यक्रमबाट अझ बढी फाइदा लिनसक्ने बताए ।
पुस मसान्तसम्म देशभर सञ्चालित मालवाहक ढुवानी सवारी सञ्चालक,ब्रोकर, ट्रान्सपोर्ट एजेण्टहरूले प्यान र भ्याटमा दर्ता भएरै ढुवानीसम्बन्धी काम गर्ने भएका छन् ।सरकारले ढुवानीमा कर लिने प्रक्रिया सहज बनाइदिएपछि देशभरका ६५ हजारभन्दा बढी मालवाहक सवारी र करीब १० हजार ढुवानी बोक्रर (दलाल)लगायतका करदाताले प्यान र भ्याटबाट ढुवानी कारोबार गर्ने भएका हुन्।
कर्णालीको समृद्धि कृषिबाटै
घर व्यवहार चलाउन, छोराछोरीको पढाई खर्च जुटाउन, दसैं तिहारमा मिठो मसिनो खान कालापहाड धाउनुपर्ने कर्णालीबासीको बाध्यता हो । ती मध्ये एक हुन् जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका ८ का धर्मसिंह कठायत । उनले जीवनका दुई दशक परिवारका खुसीका लागि कालापहाडमै बिताए । पुख्यौली पेशा जस्तै भएको कालापहाड जाने बाध्यतालाई यसै वर्षबाट पूर्णविराम लगाएको कठायतले बताए ।उनले दसैं मनाउन घर आउँदा चाँडै फर्किने सोच बनाएका थिए । तर दुईवटा बगैंचामा लटरम्मै फलेका स्याउ देख्दा उनलाई अब घरमै इलम गर्ने जाँगर पलाएको छ । यस वर्ष उनले आफ्नो बगैचाको स्याउ बिक्री गरेर १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कमाए ।